နရီမင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
>Triple One Pagoda &amp; Monastery Free Tour Invitation
>England Trip - 5
>Mar Mar Aye - 337
Posts Tagged ‘ နရီမင်း ’
နရီမင်း ● လူဆိုတာ ပျင်းတတ်တဲ့ သတ္တဝါ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၇ လူဆိုတာ ပျင်းတတ်တဲ့ သတ္တဝါ။ စေ့ဆော်မှုမဲ့ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ ယုံကြည်ချက်မဲ့ အလုပ်တွေက ပျင်းစရာပေါ့။ ငါ စာ​မေးပွဲတွေ...
နရီမင်း ● ငါ့ခေါင်းထဲ လာခွေနေတဲ့ မြွေ (မိုးမခ) မေ ၂၅၊ ၂၀၁၇ ငါ့ခေါင်းထဲ လာခွေနေတဲ့ မြွေဟာ အလမ္ပာယ်ဆရာရဲ့သွန်သင်မှုအောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါ။ ပုလွေအမှုတ်မှာ ခိုင်းတာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ မြွေမျိုးပေါ့။ ငယ်စဉ်ဘဝတလျှောက်လုံး မြွေဟာ...
နရီမင်း ● လမ်းလျှောက်အရုပ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၇ ရန်ကုန်မြို့တော်ကို လမ်းလျှောက်အရုပ်များ၊ ဘီးလိမ့်ယန္တရားများ၊ ရောင်စုံကျောက်တုံးများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သူငယ် ချင်းတဦးက ပြောခဲ့သည်။ (ကျွန်တော့်အထင်) ဤမျှအသက်ဝင်သောမြို့အား ထိုမျှအသက်မဲ့အောင် ခံစားပြသော...
နရီမင်း ● ယဲ့ဗ်တူရှင်ကိုက တော်လှန်ရေး ကဗျာဆရာလား …. ဝါဒဖြန့်ချိရေးသမားလား ….
နရီမင်း ● ယဲ့ဗ်တူရှင်ကိုက တော်လှန်ရေး ကဗျာဆရာလား …. ဝါဒဖြန့်ချိရေးသမားလား …. (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၇ ဆိုဗီယက် ရုရှားကဗျာဆရာ ယဲ့ဗ်ဂျန်နီ ယဲ့ဗ်တူရှင်ကိုဟာ ဧပြီ ၁...
နရီမင်း- အသည်းကွဲဟိုတယ် (မိုးမခ) မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၇ ဓားသွားလို ထက်​မြက်​တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ နှလုံးသားကို ဓားနဲ့ မွှန်းပြီး မင်း ထွက်​သွား ပိတ်လိုက်တဲ့ တံခါးက ငါ့အသည်းကို ခွဲပစ်ခဲ့။...
နရီမင်း ● နွားတွေ အနုပညာအကြာင်း ပြောတဲ့အခါ (မိုးမခ) မတ် ၁၈၊ ၂၀၁၇ နွားတွေ မြက်မစားကြတော့ဘူး။ နွားတွေ အနုပညာပဲ စားကြတော့တယ်။ စားတယ်ဆိုတာထက် မျိုချလိုက်တာဆို ပိုမှန်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက...
နရီမင်း ● မူးနေရင် အေးဆေးနေ (မိုးမခ) မတ် ၁၀၊ ၂၀၁၇ စားသောက်ဆိုင်မှာ အသားတုံးတွေက သေးသေးသွားပြီး လေလုံးတွေ ထွားလာတယ်။ ဘီယာခွက်ရဲ့ သုံးပုံတပုံက အမြှုပ်တွေနဲ့ “ခင်ဗျား အခုလို အေးအေးလူလူ...
နရီမင်း ● အထားအသို မှားယွင်းနေသော ဝါကျတကြောင်း (မိုးမခ) မတ် ၃၊ ၂ဝ၁၇ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ညတွေပေါ် ဆောင့်ကြွားကြွားနံနက်ခင်းတွေ နင်းလျှောက်လာခဲ့ကြပြီ။ ‘နေ’ ရဲ့ အချိန်ကိုက်ပုံနှိပ်မှုမှာ နေ့တ နေ့ဟာ ခပ်ရေးရေး ထင်လာတယ်။...
နရီမင်း ● လူငယ်တို့သဘာဝ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၇ လူငယ်တို့သဘာဝ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြတယ်။ လူငယ်တို့သဘာဝလည်း ပျော်ပါးဖူးခဲ့ကြတယ် ဆိုပါတော့။ အဲ့ဒီတုန်းက မဘသ မပေါ်သေးသလို ဗယ်လင်တိုင်းဒေးလည်း တို့ဆီကို ရောက်မလာသေးဘူး။ တခြားအရာတွေလိုပဲ...
နရီမင်း – “သမိုင်းဝင်နွား”
နရီမင်း – “သမိုင်းဝင်နွား” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၇ သူဟာ ပိုင်ရှင်ရှိနွားဖြစ်ကြောင်း နွားက ခလောက်ကလေး ခါခါပြတယ်။ နွားက Tom&Jerry ကာတွန်းကား ကြည့်ထားတော့ လည်ပတ်ရဲ့ အရေးပါပုံကို သိတာကိုး။...
နရီမင်း ● ကျွန်မကို အလှပြင်ပေးသူ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မနက်ခင်းတခုမှာ ကျွန်မ ခါတိုင်းနေ့တွေလိုပဲ နိုးလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်နေ့တွေနဲ့ မတူတာက ဒီနေ့မှာ ကျွန်မက အပျိုမဟုတ်တော့တာပဲ။ မျက်နှာသစ်မယ်လုပ်တော့...
နရီမင်း ● ပေါ်တင်လိမ်တဲ့ ဆောင်း (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၇ အကြာကြီး ပူလောင်ခဲ့သမျှ အေးမြစေရမယ်တဲ့ ဆောင်းဟာ ကတိက၀တ်တွေနဲ့အတူ ရောက်လာခဲ့။ အပူဒဏ်ရာ မိတ်ဖုကြီးတွေကို မိတ်ဖက်ပြုရင်း ယုံစားမိတဲ့ဆောင်းကို ငါတို့...
နရီမင်း ● ဘူနှစ် သို့မဟုတ် ၂၀၁၇ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၇ နှစ်ဟောင်းက ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာတစ်ယောက်လို ငါတို့ ပိုင်သမျှအရာရာကို ခိုးယူပြီး တိတ်တဆိတ် ထွက်ခွာသွားတယ်။ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်အမွေဖြစ်တဲ့ ရှိစုမဲ့စု ဂုဏ်သိက္ခာလေးတောင်...
နရီမင်း ● မကောင်းတဲ့ အမှန်တရား (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၆ မတရားမှုတွေတောထလာတဲ့အခါ အကြမ်းဖက်မှုကို အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ တန်ပြန်တာတွေ ဖြစ်လာမြဲ။ ချောင်ပိတ်ရိုက်ခံရတဲ့ ခွေးက အသေအကျေ ပြန်ကိုက်မှာပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မတရားမှုနဲ့...
နရီမင်း ● ပါးစပ်တွေ လိုက်ပိတ်တဲ့ လက်ဟာ နိုင်ငံကို ဖျက်တယ် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆ ပါးစပ်တွေ လိုက်ပိတ်တဲ့ လက်ဟာ နိုင်ငံကို ဖျက်တယ် သက်ဦးဆံပိုင်လက်ဟာ မခံမရပ်နိုင် ပွင့်အန်လာမယ့်...
နရီမင်း – ပုံပြင်ထဲက သူရဲ​ကောင်း
နရီမင်း – ပုံပြင်ထဲက သူရဲကောင်း (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ ကိုယ်ဟာ မြင်းစီး ထွက်ချင်တာလေးတခုနဲ့ တပ်ပျက်မှာ ဗိုလ်လုပ်ခဲ့၊ ရပ်သိရွာသိ ပြည့်တန်ဆာကို အပျိုပါလို့ ကြေညာပြီး တရားဝင် ထိမ်းမြားခဲ့၊...
Kim Addonizio ● Virgin Spring (အပျိုစင် နွေဦး ● မြန်မာပြန် နရီမင်း) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၆ မြင်ကွင်းက ကြောက်မက်ဖွယ် လူနှစ်ယောက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေတယ်...
နရီမင်း ● မြို့တမြို့ရဲ့ ကျဆုံးခန်း (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆ ဒီလိုနဲ့ ထရိုဂျန်မြင်းဟာ မြို့ထဲကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာခဲ့ ထင်မှတ်မထားမိခဲ့လေတော့ ငါတို့တွေ အလဲလဲအကွဲကွဲ အတုံးအရုံးပဲ။ မြို့ထဲက လူတချို့လည်း...
နရီမင်း ● မိုးကဗျာ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၆ “မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ် မေမေလာရင် နို့စို့မယ် ဖေဖေလာရင် အုန်းသီးခွဲစားမယ်” တဲ့။ သီချင်းသံ ကြားရင် ကလေးစိတ်ပေါက်သွားတယ်။ နို့စို့ချင်သလိုလို အုန်းသီးစားချင်သလိုလိုနဲ့...